U-Johnson Ungumbungazi ovelele
Kanye namasimu omama we-coconut, omunye wemifudlana yomfula i-Meenachil wenza uhambo lwakhe oluthule luye emanzini angemuva ase-Kumarakam. Futhi kulinde izimfihlo ezigcinwe kahle kakhulu zokokuzithokozisa kwamanzi angemuva…. Riverdale Villa. Ikhaya elithokomele elinamakamelo amabili ombhede, ilanga eliningi futhi ligqame ukuze lingene, futhi ngaphezu kwakho konke elinye liqala ekuzithokoziseni kwedolobhana elinamanzi angemuva.
I-Riverdale villa itholakala e-Karipputhatt, e-Aymanam Village, esifundeni sase-Kottayam e-Kerala. Iyindawo encane enamasimu omama eceleni koMfula i-Meenachil. Idolobha eliseduze liyi-Aymanam futhi ichibi lase-Vembanadu liqhele ngemizuzu engu-20 ukusuka lapha ngemoto. Idolobhana lase-Aymanam lithathe umcabango wababhali abaningi abanolwazi oluhle. Umuntu angabona ukufunda incazelo enhle yedolobhana ku-Arundhati Roy 's Booker Award-winning novel, “The God of Small Things”. Ehlelwe ngaphakathi kwe-10 kms radius yase-Kumarakom, i-Aymanam yidolobhana elincane eline-Lake Vembanad ngakwesobunxele noMfula i-Meenachil ogeleza ukusuka kwesokudla sayo. Idolobhana libusiswe kakhulu ngesipho semvelo, cishe ngomhla ka-2/3 wezwe limbozwe amasimu omama (irayisi). Njenganoma yiliphi idolobhana lase-Kuttanad, amasimu omama asezindaweni ezingaphansi kolwandle.
I-Riverdale Villa isethwe maphakathi namapulazi ezolimo, amachibi okudoba, izincomo kanye nezigqoko zamanzi ezisanda kukhiwa; iyindlu yokuvuleka nokukhanya, epholile yizinyoni, enomthunzi wezihlahla futhi ehlotshiswe umoya omnene ovela emahlathini angemuva
I-Riverdale Villa isethwe maphakathi namapulazi ezolimo, amachibi okudoba, izincomo kanye nezigqoko zamanzi ezisanda kukhiwa; iyindlu yokuvuleka nokukhanya, epholile yizinyoni, enomthunzi wezihlahla futhi ehlotshiswe umoya omnene ovela emahlathini angemuva.